कोरोना विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने उपायहरू ! | Hindu Khabar
June 6, 2020 6:40 pm || ॐ भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ||
कोरोना विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने उपायहरू !
१० जेष्ठ २०७७, शनिबार २१:२१ मा प्रकाशित In: Breaking news, मुख्य खबर, विचार/लेख, समाज
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं
विश्वव्यापी महामारीका रूपमा रहेको नेभल कोरोना भाइरस रोग (कोभिड–१९) को संक्रमण विश्वभर फैलिएको छ । सर्वप्रथम सन् २०१९ को डिसेम्वर महिनामा चीनको वुहान प्रान्तमा देखापरेको यो रोग मानिसकै माध्यमबाट फैलिएको छ । हाल विश्वभरि फैलिरहेका नयाँ कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट लागेको रोगलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले ‘कोभिड १९’ नामकरण गरी यसलाई विश्वव्यापी महामारीका रूपमा घोषणा गरिसकेको छ । कोरोना भाइरस श्वासप्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने रोग हो । यो संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा वा हाछ्यु“ गर्दा नाक वा मुखबाट निस्कने छिट्टाको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्दछ ।
यो नयाँ प्रजातिको भाइरस हो, जुन मानव जातिमा पहिले पहिचान भएको थिएन । यस भाइरसले मानिस र पशुहरूमा संक्रमण गर्दछ । यस भाइरसले सामान्य रुघाखोकीदेखि गम्भीर प्रकारको तीव्र श्वासप्रश्वास (सेभर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रम–सार्स) सम्म गराउन सक्दछ ।
चीनमा चमेराको मासुबाट मानिसमा संक्रमण फैलिएको मानिएको यो भाइरसको आजसम्म यकिन भैसकेको छैन । तथापि पशु वा पशुजन्य मासुबाट मानिसमा सरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । विश्वभर तीन लाखभन्दा बढीको ज्यान यसले लिइसकेको छ । सबैभन्दा बढी संक्रमण र मृत्यु अमेरिकामा भएको छ भने उत्तर कोरियामा अझसम्म यसको प्रभाव देखिएको छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले यो भाइरसको अन्त नहुने अनुमान गरिसकेको छ । यो भाइरसको लक्षण र असर परिवर्तन भइरहेको पाइन्छ । करिब ८० प्रतिशत व्यक्तिलाइ कुनै लक्षण नै नदेखिने तर अन्य मानिसमा सर्ने हुन्छ । रोगविरुद्ध लड्ने क्षमता राम्रो भएका व्यक्तिमा यसको लक्षण नदेखिन सक्छ । अमेरिकामा आइसोलेसनमा गएका १० जनामध्ये आठ जनाको मृत्यु भएको छ । धेरैजसो वृद्ध र दीर्घरोगी (दम, सुगर, उच्च ब्लडप्रेसर, मुटु आदि) लाई बढी असर गरेको पाइन्छ ।
नेपालमा सर्वप्रथम चीनको वुहान प्रान्तबाट आएका एक जना नेपालीमा गत माघ ९ गते यसको लक्षण देखिएको थियो । उनी उपचारपश्चात् निको भइ घर फर्किसकेको छन् । यो रोगको लक्षण कसैमा तत्काल त कसैमा ढिला देखिन्छ । जति टेस्ट बढी गर्न सक्यो त्यति धेरै संक्रमितको संख्या बढ्छ । नेपालमा टेस्ट कम भएर नै संक्रमितको संख्या कम देखिएको हो । यो रोगबाट बच्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय लकडाउनको पूर्ण रूपमा पालना गर्नु हो । सरकारले जारी गरेका सूचना र आदेशको पालना गर्नु हो । सबै आआफ्नो घरभित्र नै बस्नु हो ।
जति घर बाहिर निस्कियो त्यति असुरक्षित भइन्छ । लकडाउन पहिलो ओखती हो, यो जति प्रभावकारी उपाय अरू कुनै छैन । दोस्रो चरणमा रोग प्रवेश गरेमा अर्थात् समुदायमा संक्रमण भएमा स्थिति भयावह हुन्छ । यो अवस्थामा संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ । केही समयपपछि तेश्रो चरणको अवस्था आउँछ । यो चरणमा आइसोलेसनमा राखेका कतिपय व्यक्तिलाई भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने हुन्छ । यो ज्यादै दर्दनाक अवस्था हो । नेपालले यो अवस्था थेग्न सक्दैन । यो चरणमा गएका करिब ८० प्रतिशत मानिसको मृत्यु हुन सक्छ । तसर्थ नेपालजस्तो भौतिक स्रोत–साधन र जनशक्तिको कमी भएको देशमा तेस्रो चरण आउन नदिनु नै उत्तम उपाय हो । ज्यान बचे सम्पत्ति भोलि कमाउन सकिन्छ । विकास अर्को वर्ष गर्दा हुन्छ । तसर्थ लकडाउन सकेजति लम्याउनुपर्छ । सम्पूर्ण गतिविधि तत्काल बन्द गरिनुपर्छ । हालसम्मको तथ्यअनुसार कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा र हाँच्छयु गर्दा नाक र मुखबाट निस्कने छिटाहरू र संक्रमित व्यक्तिस“गको नजिकको सम्पर्कबाट एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्दछ ।
रोग विरुद्ध लड्ने शक्ति बढाउने उपायहरू
जसरी देशलाइ बाहिरी आक्रमणबाट बचाउन सेना र प्रहरी तैनाथ गरिन्छ, त्यसरी शरीरलाई रोगबाट बचाउन शरीरले उत्पादन गरेका एन्टीबडी नै रोगविरुद्ध लड्ने शक्ति हो । चुरोट, मदिरा सेवन, जंकफुड, फास्टफुडजस्ता चिजले इम्युन प्रणालीलाई कमजोर बनाइदिन्छ । तसर्थ देहायका उपायहरूबाट रोगविरुद्ध लड्ने क्षमता बढाउन सकिन्छ—
१ पर्याप्त निद्रा
कम्तीमा ७ घण्टा राम्रो सँग सुत्नु आवश्यक छ । कम निद्राले इम्युनिटी पावर पनि कमजोर बनाउँछ ।
२ चिन्ता र तनाव कम गर्ने
अनावश्यक चिन्ता र तनावले रोगसँग लड्ने क्षमता कमजोर बनाउ“छ । तसर्थ कुनै चिन्ता गर्नु हुँदैन । व्यायाम, योग, खेल, संगीत, नाचगानजस्ता क्रियाकलापमा बढी ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
३ व्यायाम र आराम गर्ने
हरेक दिन बिहान शरीरले धान्ने गरी व्यायाम गर्नुपर्छ । अति धेरै कसरत हानिकारक हुन्छ । शारीरिक गतिविधि बढाउनुपर्छ । शरीरलाइ आराम दिनुपर्छ ।
४ स्वस्थ र सन्तुलित आहार लिनुपर्छ
प्रशस्त फलफूल खानुपर्छ । सुन्तला, कागती, जुनार, भोगटेजस्ता सिट्रस जातका फलफूलहरू प्रशस्त खानुपर्छ । सागसब्जी नियमित खानुपर्छ । बन्दा, साग, गोभी हरेक दिनको खानामा अनिवार्य भएको राम्रो हुन्छ । पास्ता, ओखर, काजु, बदामजस्ता नट्सहरू पनि नियमित खादाँ रोगसँग लड्ने प्रतिरोधी क्षमतामा वृद्धि हुन्छ । गेडागुडी पनि हरेकजसो खानामा भएको राम्रो मानिन्छ । अदुवा, बेसार, मरिच, ल्वाङजस्ता मसला जातका खानेकुराहरू खानु राम्रो मानिन्छ । त्यसैगरी दुध र दही पनि प्रशस्त खानाले इम्युन सिस्टमलाइ मजबुत बनाउ“छ ।
५ धूमपान र मदिरा पूर्णतया बन्द गर्ने
धूमपान र मदिराले रोगसँग लड्ने क्षमतामा कमी ल्याउँछ । तसर्थ यी चिजको सेवन पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्दछ ।
६ रिफाइन्ड चिनीयुक्त आहार नखाने
चिनीलाइ मन्द विषका रूपमा लिइन्छ । चिनीको मात्रा भातलगायत फलफूलबाट प्राप्त हुन्छ । रिफाइन्ड गरेका खानेकुराले शरीरलाई गलाउँछ र कमजोर बनाउँछ । तसर्थ प्रत्यक्ष चिनी भएका खानेकुराहरू खानु हुदैँन ।
समुदायमा संक्रमण गराउने सम्भावित तत्वहरु
१ लकडाउनको उल्लंघनकर्ताहरू
राजनीति र उच्चपदस्थहरूको दबाब र प्रभावमा परी पहुँचकाआधारमा सवारी पास वितरण गर्ने र अनावश्यक रूपमा आवतजावत गर्ने व्यक्तिहरूबाट नै संक्रमण फैलिने सम्भावना बढी हुन्छ । यी व्यक्तिहरू बिनाकाम पनि लखरलखर सडकमा हि“डिरहन्छन् । कुनै पार्टीले आयोजना गरेको बन्दजस्तो ठानेर अवज्ञा गर्नु आफैलाई घातक हुन्छ । यो न त बन्द हो न नाकाबन्दी हो । यो त बन्दाबन्दी हो ।
२ अत्यावश्यक वस्तु र सेवा प्रदायकहरू
नेपाल सरकारले अत्यावश्यक सेवा र वस्तु प्रदान गर्ने भनी किटान गरेका क्षेत्रका व्यक्तिहरूले सुरक्षाका उपकरणहरूको प्रयोग नगरीकन सेवा प्रदान गर्नु । खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, औषधि, पानी, बिक्रेताहरूले सामाजिक दूरी कायम नगर्नु, मास्क नलगाउनु, सेनिटाइजरको व्यवस्था नगर्नु, नगदमा कारोबार गर्नुले कोरोनाको संक्रमणलाई बढावा दिइरहेको छ ।
३ गलत राहत वितरण प्रणाली
अत्यावश्यक नहुँदा पनि भिडभाड गरी घरघरमा पुगेर राहत वितरण गर्नाले यदि वितरणकारीमध्ये एक जना संक्रमित भएमा घरका सबै जना संक्रमित हुने वातावरण सिर्जना भएको छ । राहत वितरणको मापदण्ड पालना भएको छैन । राहतका लागि निवेदन दिन ठेलमठेल गर्दै लाइनमा बस्नुले असुरक्षा भएको छ । एक जना वडा अध्यक्षलाइ संक्रमण भएमा सिंगो गाउनै संक्रमण हुन जान्छ ।
४ बीउबिजन वितरण
विभिन्न गैरसरकारी संस्था र सहकारीमार्फत बीउपल गाउँगाउँमा बाड्ने वहानामा सबै कृषकका घरघरमा पुग्नाले संक्रमण पनि सँगै जाने विषयलाई नजरअन्दाज गरिनु ।
५ मास्क र साबुन वितरण
मास्कको प्रयोग कहाँ गर्ने र नगर्ने विषयमा जानकारीको अभाव वा सस्तो लोकप्रियताका लागि घरघरमा पुगी मास्क र साबुन बा“ड्नाले पनि यस रोगको फैलावटलाई सहायता गरेको छ ।
६ विदेशबाट आउने व्यक्तिहरू
भारतलगायत देशबाट आउने विदेशी र नेपाली नागरिकबाट नै सर्वप्रथम कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । लकडाउन सुरु भएपछि भारतबाट लुकिछिपी हिँडेर चोर बाटो प्रयोग गरी नेपाल आउने व्यक्तिहरूले गाउ“ घरमा आएपछि खसी काटेर खाने, जमघट गर्ने, वल्लोपल्लो घरमा जाने गर्नाले रोगको फैलिने दरमा वृद्धि भएको छ । कुटनीतिक पहलबाट बिदेशमा रहेका नेपालीलाइ विदेशमै सुरक्षितरुपमा राख्ने प्रवन्ध गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । करिव ८५ लाख नेपाली विदेशमा छन् ती सबै वा आधामात्र आएमा पनि नेपालले थेग्न सक्दैन ।
७ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र एटीएम मसिन
पैसा भाइरस बोक्ने एक प्रमुख माध्यम हो । नेपाल सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत राखेर निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न दिइरहेको छ । यसबाट भाइरस सर्ने प्रमुख माध्यमका रूपमा पैसा भएको छ । त्यसैगरी एटीएम मेसिनमा सानिटाइजरको व्यवस्था नगर्दा पनि रोग सर्ने सम्भावना बढेर आउ“छ ।
८ खोप कार्यक्रम सञ्चालन
साना बालबालिका र सुत्केरी महिलाहरूको रोगस“ग लड्ने प्रतिरोधी क्षमता कम हुन्छ तर खोप लगाउने नाममा यिनीहरूलाई सामाजिक र भौतिक दूरी कायम नगरी भिडभाडमा जम्मा गर्नु खतरापूर्ण हुन्छ । खोप कार्यमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी, बच्चा र आमा सबै रोग सार्ने तŒवका रूपमा देखिएका छन् ।
९ पुस्तक पसल सञ्चालन गर्नु
स्कुल र कलेज बन्द भए पनि पुस्तक पसल सञ्चालन गर्नाले हरेक पुस्तक बालबालिकाको घरसम्म भाइरस पुग्ने माध्यम बन्न सक्छ । पुस्तक र पुस्तक बिक्रेतालाई भाइरसमुक्त बनाएर मात्र यसो गरिनुपर्दथ्यो ।
१० विकास निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिनु
आजको आवश्यकता भनेको जसरी पनि ज्यान जोगाउनु हो तर हामी ज्यानलाई धरापमा पारेर विकास निर्माण मात्र भनिरहेका छौं । बा“चियो भने अर्को वर्ष विकास गरे हुन्छ । मान्छे नै नरहे किन चाहियो विकास ? लकडाउनपछि घर फिर्ता गरिएका कामदार, मिस्त्री र मेसिन चालकहरूलाई आरडिटी वा पीसीआर चेकजा“च नगरी रोगको खतरा भएका ठाउ“बाट पुन काममा फिर्ता गर्दा संक्रमण बढ्न सक्छ ।
११ धार्मिकस्थल र कार्यक्रम
अझै पनि कतिपय मठ, मन्दिर, मस्जिद, गुम्बाजस्ता धार्मिक स्थलमा विभिन्न वहानामा धेरै मानिसहरू जम्मा हुने र धार्मिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नाले संक्रमणलाई बढाएको छ ।
१२ परम्परागत रीतिरिवाज र संस्कृति
मृत्यु संस्कारमा आवश्यकभन्दा धेरै मानिसहरू जमघट गर्ने । मलामी जाने, किरिया घरमा घोत लाने नाममा अत्यधिक भिड गर्ने र यो कार्यमा सामाजिक दूरी कायम नगर्ने साथै सुरक्षाका उपकरणहरूको प्रयोग नगर्ने जस्ता परम्परागत सामाजिक रीतिरिवाज र संस्कृतिले समाजमा संक्रमण फैलाउन मद्दत गरेको छ ।
१३ लकडाउनको नीतिविरुद्धका गतिविधिहरू
लकडाउनको नीति अवलम्बन नगरी जथाभावी रूपमा हिडँडुल गर्ने, घरघरमा जाने, साइला बा साइली आमा भन्दै जाने, ढोग गर्ने, खसी, बोका, कुखुरा काट्ने, तास खेल्ने, नाचगान गर्ने जस्ता कार्यले कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई तीव्र बनाउ“छ ।
संक्रमण फैलिन नदिने उपायहरू
१ लकडाउन नीतिको प्रभावकारी पालना गर्ने
हरेक गतिविधिमा सामाजिक दूरी कायम गर्ने, साबुन–पानीले राम्रोस“ग हात धुने, बाहिर जा“दा मास्क लगाउने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, घरभित्रै बस्ने, बाहिर नजाने, हात नमिलाउने, नमस्कार गर्ने संस्कारको विकास गर्ने, नेपाल सरकारले जारी गरेका सूचना र निर्देशनको पालना गर्ने गर्दा संक्रमणको फैलावटलाई कम गर्न सकिन्छ ।
२ वितरण कार्यलाई तत्काल रोक्ने
राहत वितरण, बीउबिजन वितरण, मास्क र साबुन वितरणजस्ता कार्यलाई पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्दछ । हातमुख जोर्न समस्या भएकाको हकमा राज्यले घर घरमा पुराउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
३ नागरिक परिचालन गर्ने
हरेक टोलका स्थानीय युवाहरू, स्वास्थकर्मी, स्वयंसेविका, राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरूलाई परिचालन गरेर नयाँ व्यक्ति को आयो ? कहाँ छ ? के गरिराछ ? त्यसको निगरानी गर्ने, लगत राख्ने, कोही नयाँ आएमा कम्तीमा दुई साता क्वारेन्टाइनमा राख्ने, उनीहरूको स्वास्थ्य चेकजा“च गर्ने जस्ता कार्य गरेर नयाँ मानिसहरूको आवागमनलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।
४ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा गर्ने संस्थालाइ बन्द गर्ने
नगद कारोबारबाट संक्रमण हुने भएकाले नगद कारोबारलाई तुरुन्त बन्द गर्न बैंकिङ तथा बिमाको कारोबार रोक्नुपर्दछ । डिजिटल एप्लिकेसनको प्रयोग गर्ने, एटीएम मेसिनको प्रयोग गर्दा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, अनलाइन बैंकिगको प्रयोग गर्ने गर्नुपर्दछ ।
५ अत्यावश्यक सेवाबाहेक सबै सेवा र वस्तु बन्द गर्ने
खद्यान्न, तरकारी, औषधि, पानी, दुध, पेट्रोलियम पदार्थजस्ता अत्यावश्यक वस्तु बोक्ने र इमर्जेन्सी बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्सबाहेकका सबै यातायात सेवालाई पूर्ण रूपमा बन्द गरिनुपर्दछ । अत्यावश्क सेवा र वस्तु प्रदान गर्ने कार्यालयबाहेक सबै कार्यालयहरू बन्द गर्नुपर्दछ । खोप कार्यक्रम, पुस्तक पसल, विकास निर्माण, धार्मिक कार्यक्रमहरूलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्दछ । मृत्यु संस्कारमा २५ जनाभन्दा बढी मानिस जान दिनु हु“दैन । किरिया बस्नेबाहेक अन्यलाई सवारी पास दिनु हु“दैन ।
ज्यान बाँचे संसार देखिन्छ । तसर्थ अहिलेको समय ज्यान बचाउनमा मात्र केन्द्रित गर्नुपर्दछ । विकास निर्माणजस्ता कार्य त बा“चेमा अर्को वर्ष गर्दा पनि हुन्छ । छ महिना वा एक वर्ष ढिला विकासले तात्विक फरक पार्दैन । नेपालजस्तो भौतिक सुविधा र जनशक्तिमा कमजोर देशमा कोरोना भाइरसको संक्रमणले तेस्रो चरण पुगेमा आईसियू र भेन्टिलेटरको अभावमा धेरैको ज्यान जान सक्छ । यो अवस्था देशले धान्न सक्दैन । जो जहा“ छ त्यही“बाट प्राण त्याग्नेबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प रह“दैन । जसको प्रतिरोधात्मक क्षमता राम्रो छ उ बाँच्छ भने कमजोरहरू मर्दछन् । तसर्थ यस अवस्थामा हाम्रो औषधि भनेको लकडाउन नीतिको पूर्ण पालना गर्नु हो । घर बाहिर ननिस्किनु हो । समुदाय संक्रमण हुनबाट बचाउन सकेमा हामी यो रोगविरुद्ध सफलता प्राप्त गर्नेछौं ।
यदि समुदाय तहमा संक्रमण फैलियो भने स्थिति भयावह हुनेछ । संक्रमितको प्रत्यक्ष निगरानी र सामिप्यमा रहने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायत प्रशासनका कर्मचारीलाई पर्याप्त मात्रामा सुरक्षा उपकारणहरू पीपीई सेट, मास्क, सेनिटाइजर, ग्लोब्स उपलब्ध गराउनु अत्यावश्यक छ नत्र यिनै फ्रन्टलाइनरबाट कोरोना फैलिन सक्छ । हाँडीमा मकैका फुला उठे जसरी टोलटोलका घरमा संक्रमितहरू देखापर्ने छन् । त्यो अवस्थामा राज्य पूर्णतया असफल हुनेछ र नागरिकले अकालमा मृत्युवरण गर्नु पर्नेछ । त्यसैले समयमा नै होसियार र बुद्धिमानी बनौं । लकडाउनको नीति, नेपाल सरकारका आदेश, निर्देशन र सूचनाको पूर्ण रूपमा पालना गरौं । घरबाट बाहिर निस्कि“दा मास्क, सेनिटाइजर, ग्लोब्सको प्रयोग गर्ने, खोक्दा, हा“च्छ्यु गर्दा नाक मुख छोप्नुपर्दछ । अवको केहि समयका लागी सामाजिक बन्दाबन्दीलाइ कडाइकासाथ पालना गर्नुनै श्रेयश्कर हुन्छ।
(लेखकः जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ।)